Manchester City oo kaga yaabsatay kooxda Bayern Munich qiimaha Leroy Sané – Gool FM
(Manchester) 10 Juun 2020. Shabakada “Sky Sport” ayaa waxay shaaca ka qaaday in maamulka kooxda Man City ay ku adkeysanayaan qiimaha ay ka codsadeen saraakiisha naadiga Bayern Munich, si loo dhameystiro heshiiska uu Leroy Sané ugu wareegayo Bavarian-ka.
Magaca Leroy Sané ayaa lala xiriirinayey inuu u dhaqaaqayo kooxda Bayern Munich, maadaama uu xiddiga reer Germany heshiis kama dambeys ah la gaaray Bavarian-ka, si uu ugu biiro xilli ciyaareedka soo socda.
Laakiin waxay u muuqataa in Bayern Munich ay mar kale ku guuldareysatay inay heshiis la gaarto kooxda Manchester City kaasoo ku aadan qiimaha lagu dhameystirayo heshiiska ee Leroy Sané.
Shabakada “Sky Sport” ayaa waxay tilmaamtay in saraakiisha kooxda Bayern Munich ay la xiriireen dhigooda Manchester City, waxayna Sky Blues codsatay qiimo dhan 70 million euros si ay ugu iibiso xiddigeedan, halka Bayern ay soo bandhigtay kaliya qiimo dhan 40 million euros.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in kastoo Bayern Munich aysan wax heshiis ah la gaarin Manchester City, hadana waxaa macquul ah in Leroy Sané lagu arko isagoo xiran maaliyada kooxda weyn ee Bayern.
Bayern Munich ayaa Leroy Sané ka dhigatay bar-tilmaameedkeeda koowaad iyo midka ugu muhiimsan xagaagan, laakiin ma bixin doonto lacagta ay dalbadeen maamulka Manchester City.
Waxaa xusid mudan in Leroy Sané oo 24 jir ah uu dhacayo qandaraaskiisa kooxda Man City xagaaga 2021.